घर बसी–बसी धन कमाउने उपाय - आभास
सबैभन्दा पहिले माइक्रोवर्कस् डट कममा गएर एकाउन्ट बनाउनुहोस् । एकाउन्ट तयार भएपछि तपाईंको ठाउँबाट गर्न मिल्ने कामहरूको सूची देखिन्छ ।
उक्त सूचीमा काम गरेपछि त्यसबापत कति पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो काममा को–कति सफल छन्, त्यो काम सक्न लाग्ने अनुमानित समय तथा त्यो काम पहिले कति जनाले गरिसकेका छन् जस्ता जानकारी पाइन्छ । माइक्रोवर्कस्मा आफूलाई उपयुक्त र सजिलो काम खोज्न वा रोज्न सकिन्छ ।
काम कस्तो हुन्छ ?
माइक्रोवर्कस्मा सामान्यत: साधारण अर्थात् कम्प्युटर तथा इन्टरनेट चलाउन जान्नेहरूले गर्न सक्ने काम नै हुन्छन् ।
विभिन्न वेबसाइटमा नयाँ एकाउन्ट बनाउने, गुगलमा गएर भनेअनुसारको किबर्ड खोजेर क्लिक गर्ने, युट्युबमा भिडियो हेर्ने, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट लाइक, कमेन्ट, सेयर, रिभ्यु गर्ने, कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने, ब्लगमा कमेन्ट गर्ने, लेख लेख्नेजस्ता काम माइक्रोवर्कस्मा उपलब्ध हुन्छन् ।
यी काम गर्दा काम दिनेले कस्तो अपेक्षा गरेको छ भनेर पहिले नै भनेको हुन्छ त्यसैगरी त्यो काम कसरी गर्ने भनेर पनि त्यहाँ प्रस्ट रूपमा निर्देशन दिइएको हुन्छ । त्यही निर्देशनअनुसार काम गरेर कमाउन आफूले गरेको कामको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के नगर्ने ?
एकभन्दा बढी एकाउन्टबाट काम नगर्नुहोस्, त्यसो गरिएको फेला परे तपाईंको एकाउन्ट नै बन्द हुन सक्छ भने तपाईंको आईपी एड्रेसमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ र कमाइसकेको रकमको भुक्तानीसमेत नदिइन सक्छ । प्रोक्सी, भीपीएन कनेक्ट गरेर पनि काम गर्नु हुँदैन । आफूले गर्न नसक्ने कामको जिम्मा लिनु हुँदैन । यसले आफ्नो एकाउन्टलाई अविश्वसनीय बनाउँछ ।७ सय ५५ भन्दा तल सक्सेस रेट राखे थोरै मात्र काम प्राप्त हुन्छ ।
पैसा कसरी प्राप्त गर्ने ?
कम्तीमा ९ डलर कमाइसकेपछि तपाईं पेआउटका लागि योग्य हुनुहुनेछ । पेपाल, स्क्रिल तथा पायोनियरमार्फत पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।यसमा आफूले कमाएको रकम सातामा दुई पटक भुक्तानी गरिन्छ ।
माइक्रोवर्कस्ले देखाएको सूचीअनुसार काम गरेर थुप्रै नेपालीले प्रशस्त कमाएका उदाहरण निकै छन् । यो सामग्री तयार पार्दासम्म पोखराबाट प्रयोगमा आएको वैकुण्ठ १९९३ नामक युजरले १ हजार ३ सय डलर (१ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी) कमाइसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी काठमाडांैबाट निराजन ९४ नामक युजरले लगभग १ हजार डलर कमाएको तथ्यांक माइक्रोवर्कस्को बेस्ट वर्कस्मा उल्लेख छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कमाउनेहरूको सूचीमा नेपालका १५ जनाभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् ।
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा नाम नखुलेका एक नेपाली एकाउन्ट (मेम्बर–५०६७३१) ले लगभग २ हजार ५ सय डलर कमाइसकेका छन् । त्यसैगरी मेम्बर–२०८५०३ नामक नेपाली एकाउन्टले १ हजार ८ सय ५० डलर कमाएको देखिन्छ ।
Posted in Saptahik, Technology
नेपाली क्रिकेट हेर्ने स्वदेशी साइट
पोर्न साइट बन्द हुनै सक्दैन !
मोबाइललाई बनाऔं अझ स्मार्ट
क्षुद्र ग्रह पृथ्वीको विनाशको कारण बन्न सक्छ
सामाजिक सञ्जालमा प्रेमसम्बन्ध
विश्वकप — २०१८ अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग
Copyright © 2019 आभास – OnePress theme by FameThemes